Ukugoqa i-Roller Factory - China Abasongi Bokusonga Abenzi Nabathengisi
Incazelo yomgqomo werabha ombozwe irabha: Ngemuva kokwenza i-roller, ngezidingo ze-anti rust, anti-corrosion kanye nokwesekwa, nayo idinga ukwelashwa ngaphezulu noma ukumbozwa, njengokupenda, ukufaka i-galvanizing, i-Teflon sishaye, ukumboza injoloba, i-chromium plating, i-ceramic spraying kanye namachibi. Ngokuya ngosayizi, kunezilinganiso ezinkulu ezinjenge-roller yokwenza imishini yamaphepha (ubude bungafinyelela ngaphezu kwamamitha ayi-10, ububanzi bungaphezulu kuka-1500 mm), kunezinga elincane elifana ne-othomathikhi yomugqa womhlangano webhande ...
Izici ze-PVC roller 1. Roller conveyor (roller conveyor) ilungele ukuhambisa zonke izinhlobo zamabhokisi, izikhwama, ama-pallet, njll. Izinto zokwakha eziningi, izinto ezincane noma izinto ezingajwayelekile zidinga ukuhanjiswa Ezokuthutha ngamaphalishi noma ngamabhokisi entengo. 2. Ingathutha impahla eyodwa esindayo noma ithwale umthwalo omkhulu womthelela. 3. Isakhiwo sihlukahlukene. Ulayini wobuhlanga ungahlukaniselwa emugqeni wamandla kagesi futhi umugqa ongewona wamandla womgwaqo ngokusho kwemodi yokushayela, futhi ungahlukaniswa ube conveyi enezingqimba ...
Double chain roller, ukuhlukahluka, ukukhetha, kungenziwa ngezifiso ngokuya ngezidingo zamakhasimende. Isetshenziswa kabanzi. Ukuphrinta kwe-roller, njengokuphrinta kwephephandaba, inqubo esheshayo engakhiqiza ngaphezu kwamayadi angama-6000 endwangu ephrintiwe ngehora. Le ndlela ibizwa nangokuthi ukuphrinta ngomshini. Ekuphrinteni nge-roller, amaphethini aphrintwa endwangweni ngokuqopha ama-rollers ethusi (noma ama-roller). Isigubhu sethusi singabazwa emigqeni ehlelwe kahle kakhulu, engaphrintwa inemininingwane eminingi, ithambile p ...